Moments leh saaxiibo 36
Xuquuqda, 1912, by HW PERCIVAL.
Waa maxay sababta gorgoriyuhu loo isticmaalo calaamad u ah quruumo kala duwan?
Waxay u badan tahay in ujeedooyinka kala duwan ay keeneen qaadashada gorgortan sida calaamad ay samaysay waddammo badan oo qaata. Hase yeeshee waxaa laga yaabaa in loo maleynaayo in la qaaday sababtoo ah waxa ugu wanaagsan ee soo bandhigay dabeecadda iyo siyaasadda, hamiga, ujeedada quruumaha ka soo jeeda heerkooda.
Gorgor waa boqor ka mid ah shimbiraha iyo hawada, sida libaaxa lagu sheegay in ay u ahaato mid xayawaan ah. Waa shimbir shimbir ah, laakiin sidoo kale guul. Waa shimbir xooggan oo xooggan, awood u leh duulimaad dheer oo dheer. Waxay si dhaqso ah ugu foororsatay ugaadhsigeeda, dhaqso bay u kacdaa, oo sharaf badan ayay sarraysaa.
Quruunku wuxuu doonayaa xoog, dulqaadasho, dhiirranaan, dulqaadasho, xukun, xoog leh. Gorgosku wuxuu leeyahay dhammaantood kuwan si heer sare ah. Waa macquul in la rumaysto in kuwani ay yihiin qaar ka mid ah sababaha keenay waddamada ama qabiilooyinka ama taliyayaashu inay qaadaan gorgortan sidii heerkooda. Xaqiiqdu waxay tahay inay calaamad u ahayd qaar badan oo ka mid ah quruumaha fashilmay ee taariikhdeena taariikhda ah, gaar ahaan kuwa ku dagaalamaya meelaha fog.
Kuwani waa astaamaha uu gorgortan yahay. Hase yeeshee, quruumaha qaata shimbirahan sida calaamadaheeda, badanaa waxay uqalmayaan ama ku takhasusaan dabeecadahooda gaarka ah ama ujeedo leh ama midkoodba midkoodna ku dhejinaya baqshadda la socota gorgortanka ama adigoo calaamad ku qoraya gawaarida gorgortanka ama googo, sida laanta, fallaarada, calanka, gaashaan, xajka, iftiinka, mid kasta oo ka mid ah oo keliya ama la socdo calaamado kale waxay calaamad u yihiin dabeecadda qaranka ama sifooyinka quruunku jecel yahay iyo waxa ujeedooyinkoodu yihiin.
Dhammaan tani waxay ka soo jeedaa fikrado iyo fikrado mug leh. Waxaa jira calaamad kale oo ah gorgortanka halkaas oo sifooyin isku mid ah laga yaabo in laga arko fikradda ruuxiga ah.
Waa mid ka mid ah afarta "noolaanshaha" ee ku xusan Apocalypse kuwaas oo la sheegay in ay istaagaan carshiga Ilaah. Gorgortiga waxaa loo xilsaaray Calaamadaha Zodiac ee Saxeexa. Waxay calaamad u tahay awoodda ruuxiga ah ee qofka. Gorgortadu waa firaaqo, awoodda ruuxiga ah ee qofka oo kor u qaadi kara sareeya. Qaranka ama nin qaata gorgortam sida astaanta ah ee dareenka ruuxiga ah ujeedkiisu yahay inuu helo jihada ruuxi ah oo dhan oo ay matalaan gorgorka calaamadihiisa. Wuxuu doonayaa inuu guuleysto dhammaan wixii isaga ka hooseeya oo isticmaalaya awooddiisa si uu u kaco heer sare. Adoo hogaaminaya awooda awoodeed ee gorgortanku u taagan yahay, isagu waa guulaystaha rabitaankiisa, wuxuu ku kasbaday xukunka gobolka ee jirkiisa isaga oo u soo baxaya, sida gorgorku, wuxuu gurigiisa ku dhejiyaa dhererka buuraha ee ka sarreeya jeexjeexka ilmo-galeenka. Sidaas awgeed wuxuu ka soo baxaa Scorpio calaamad, taas oo ah dhammaadka ugu hooseeya ee lafdhabarta, ilaa sare, taas oo keenta madaxa.
Miyuu gorgortan labanlaabmood ee loo isticmaalo sida calaamadda qaranka ee waddamada qaar, oo laga helayo taallada Hititii ee wakhtiyadii Kitaabka Qudduuska ah, oo loo malaynayo xaalad xag jir ah?
Marka gorgortan laba-gees ah loo adeegsado astaan ​​qaran waxaa mararka qaar loogu talagalay in lagu muujiyo waxyaabo kale oo loogu talagalay, in labada waddan ama waddan ay midoobaan midkood, inkastoo laga yaabo in ay laba madax u noqon karaan dawladda. Haddii aan calaamado kale la soconin gorgortanka labajibbaaran ee ku yaalla taallada Hititii ee qadiimka ah, calaamadkani ma tixraaci doono nin xijaaban ah. Qofka raggan ah ama nin lab ah oo lab ah, waa inuu ku jiraa laba hawlood, laba awood oo dabiici ah. Gorgortan laba-geesood ah waa mid isku mid ah, maadaama labada madaxba ay yihiin gorgor. Qofka xajinta ah ee loo yaqaan 'baal gorgortan', gorgosku waa inuu la socdaa ama la xidho libaax, taasoo ah, inkasta oo ay ku jirto dhul kala duwan, ka mid ah xayawaanka waxa gorgor ku dhex jira shimbiraha. Rosicrucianski hore waxay ka hadlayeen "Dhiiga Laanta Cas," taas oo ay ula jeedeen rabitaankooda, ama dabeecadda xayawaanka ee manta. Waxay sidoo kale ka hadlayeen "Gluten of White Eagle," taas oo ay ula jeedeen awoodda ruuxiga ah-ruuxiga ah ee nin. Labadani, dhiigga libaaxa cas, iyo gluten ee gorgortanka cad, waxay yiraahdeen, waa in ay la kulmaan oo ay isudheqeeyaan oo guursadaan, oo ay ka mid yihiin ururadooda waxay yeelan doonaan awood weyn. Tani waxay u egtahay mid jilicsan oo qallafsan haddii aan calaamadda la fahmin. Markay tahay, waxaa la ogaan doonaa in ay fahmeen wax badan oo ku saabsan geeddi-socodka jir ahaaneed marka loo eego dhibcaha.
Dhiigga libaaxa ayaa ah rabitaanka firfircoon ee ku dhex nool dhiigga jirka. Gluten ee gorgojada cad ayaa ku jirta qaybta koowaad ee lafaha jidhka. Xuubka ayaa geli kara wadnaha waana sidaas oo la mid ah dhiiga. Laga soo bilaabo ururkan waxaa ku dhalatay awood kale oo caqli gal ah. Haddii ay taasi dhacdo, Alchemists ayaa sheegay, in libaaxu uu daciif noqon doono, gorgorkuna wuu lumi doonaa awoodda kor u kaca. Haddii, si kastaba ha noqotee, glacen ee gorgorka cad iyo dhiigga libaaxa cas ee waa inuu sii wadaa isku-duubka isagoo aan u bixin wax dareen ah, libaaxu wuxuu noqonayaa mid xoog badan, gorgorkuna awood badan yahay, iyo awoodda cusub ee dhalata dhalinyaradu jidhka iyo xoogga maskaxda.
Labadan, libaax iyo gorgorka, waxay calaamad u yihiin labada mabda ', ragga iyo dumarka ay ka soo jeedaan maskaxda jirka. Androgyne waa mid ka mid ah haweenka maskaxda iyo haweenka uurka leh iyo shaqooyinka. Libaaxa iyo gorgortanka, dhiigga iyo qanjirada, oo isku miisaamaya jirka isla markaana fulinaya hawshooda si ay u abuuraan awood cusub oo ka dhex jirta jirkani iyo iyada oo aan u jeedin dareenka muuqaalka dibadda, abuuro awood cusub oo jirka jirka ah kaas oo ku dhashay cusub oo ah, sida gorgortan, ayaa ka soo kici kara dhulka iyo sarreeya meelo sare.